ezi na ulo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: ezinụlọ na ụlọ
Etu igwe maka ụlọ: ihe isi ike nke ịhọrọ. Igwe kpo oku nke igwe: nyocha, ọnụahịa
Ikanu-igwe di iche iche pụtara ogologo oge gara aga. Mba ọ bụla nwere mpaghara nke ya nwere ụdị nke ya, yana etu ya. Naanị ihe anaghị agbanwe agbanwe. Ngwunye ndị na-ekpo ọkụ nke igwe nwere mejupụtara ntụ, valves dị na ọkpọkọ, ...
Ọkụ moto-mgbapụta: njirimara, ngwaọrụ. Ofdị Mgbapụta Ọkụ
Ihe na 15.09.2019 10.01.2020
A, igwe na-ejikọ ọkpọkọ na nkwukọrịta nke ebe a na-akọ ugbo na ala ubi. Ejikwa ha nke ọma na nhazi nke ịgba mmiri na ịgba mmiri, ha bukwara maka iji kpo oku mmiri nke oma n’oge ide mmiri nke ala…
Etu esi agha nkpuru karia ka osi eweputa ihe ubi
Ihe na 15.09.2019 13.01.2020
Carrots bụ ihe ọkụkụ a ma ama kemgbe ụwa. A na-eri ya gburugburu ụwa, ejiri ya maka ebumnuche ọgwụ, cosmetology. Ha na-eji achịcha eme achịcha, mee jam, mee nkwadebe maka oge oyi.
Spathiphyllum mmeputakwa n’ụlọ
N'ime ọtụtụ akwụkwọ ụlọ mara mma nke okooko osisi mara mma, spathiphyllum bụ ihe kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-akụ ifuru. Nlekọta na ịmụpụta ifuru a dị mfe, ọbụlagodi, dị ka ihe ọ bụla dị ndụ, na nlekọta ...
Gini bu igwe eji eme ihe? Atordị onye na-agagharị agagharị: onye nyocha ya
Echiche nke igwe eji eme ihe eji eme ka igwe nwuo. Ihe mmepe abụọ a nwere atụmanya dị mma maka inweta ọnọdụ onye isi n'ihe metụtara ahịa, yana n'ihi ihe dị iche iche ...
Kwà mkpuchi ajị ajị: gịnị bụ ya, gịnị kpatara eji achọrọ ya?
N'ime ụlọ ebe akwa taa, enwere ọtụtụ ịhọrọ site na. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ụdị ọnụọgụ sara mbara na-agbagha ọbụna onye kachasị nwee nghọta. Ka emechara, ihe obula nwere ihe ha nwere na ihe ha nwere. Otu onye…
Dog nke Alexey Vorobyov: ìgwè, nkọwa
A mụrụ Alexey Vorobyov, onye ama ama dị ka onye na-agụ egwú na-eme nke ọma, onye na-eme ihe nkiri na onye sonyere na ihe nkiri televishọn dị iche iche na 1988 na Tula. Site na mgbe ị dị obere, onye omenkà ahụ malitere itinye aka na ihe okike, na-eme nke ọma na mbọ ya. Ya mere, na…
Ihe osise mara mma maka ụbọchị mama. Nyocha ụbọchị ezumike nke ụbọchị nne
N'ime ọtụtụ ezumike a na-eme ememme, Motherbọchị Ndị Nne pụrụ iche na otu ụdị. N’ụbọchị a, a na-elebara ndị ọzọ anya n’ebe ndị anyị hụrụ n’anya nọ — nne anyị. Nwanyi, ...
Kọmitii Ndị nne na nna nke ụlọ akwụkwọ ọta akara: ikike na ọrụ dịịrị
Ihe na 15.09.2019 28.11.2019
A na-ahọpụta kọmitii nne na nna na ụlọ akwụkwọ ọta akara site na votu izugbe. Ọtụtụ mgbe, ndị nne na nna na-enwe olileanya na ihe a ga-adakwasị ha. Nke a bụ n'ihi na a na-anakwere na ọrụ a adịghị elebara ya anya. Ezigbo ...
Nọvemba 17 bụ ụbọchị ụmụ akwụkwọ mba ụwa - ezumike nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme!
Ihe na 15.09.2019 31.12.2019
Afọ nwata akwụkwọ bụ oge kachasị mma na ndụ onye ọ bụla. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị ga-eche na ọ bụ n'ụlọ, na mfe ụlọ mbikọ, ndị enyi na ndị enyi gbara ya gburugburu. Needkwesịrị inwe oge maka ihe niile: nweta ...
Etu esi eji aka gi ha gba akwa nhicha mmiri?
Ememe baptizim bụ emume dị nsọ nke onye ọ bụla nke Ọtọdọks ga-emerịrị. Ikwesiri ịkwadebe maka ya tupu oge eruo. Onwere udi odi nkpa kwesiri idi ka ha gha aghaghi idi ire: obe, akara baptism, kandụl na…
Shipgbọ mmiri ụgbọ mmiri Lego bụ ihe egwuregwu na-adọrọ mmasị ma baa uru.
Ihe egwuregwu ụlọ nke ụlọ ọrụ Danish "Lego" na-adọrọ adọrọ ụmụaka, ọkachasị ụmụaka. Eziokwu na ha riri oke ọnụ ka a kọwara site na ngwaahịa dị elu nke onye nrụpụta Europe a. Mana ụmụaka achọghị ịghọta nke a ...
Tebụl oriọna maka desktọpụ ahụ. Otu esi ahọpụta oriọna ziri ezi
Ọ bụghị ihe nzuzo na ezigbo ọkụ bụ ntọala nke ọrụ dị mma na ahụike nke anya gị. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ oriọna tebụl kwesịrị ekwesị maka desktọpụ gị. Mana kedu ka o si ghara…
Stroller Bumbleride Indie Twin: nyocha ndị ahịa
Ihe eji eme ka aru di ike bu ihe oma umu aka. Ọbụghị nne na-alụghị di nwere ike ime ya ma enweghi nnweta a dị mkpa taa. Site na ịdị arọ na maneuverability nke stroller na-adaberekarị ọ bụghị naanị na ngagharị nke nne na nna, ...
Komondor (Onye Ọzụzụ Atụrụ Họngaria): nkọwa agbụrụ, agwa na foto
N'ime ụwa enwere ọtụtụ nkịta dị ịtụnanya n'ezie. Otu n'ime ha bụ onye ọzụzụ atụrụ Hungary, na mbụ ị nwere ike ghara ịchọpụta nkịta ahụ n'ihi uwe ogologo ya na akwa ya, dị ka a ga - asị na…
Ngwaọrụ ụmụ nwanyị ga-ede guzo: aha, nkọwapụta
Nature nyere ụmụ nwoke ikike ide mgbe ha na-eguzo ọtọ. Mana n'otu oge, ọ bụrụ na ha chọrọ, ha nwere ike ime nke a mgbe ha nọ ọdụ. Mana ụmụ nwanyị enweghị nhọrọ ruo…
Ka anyị kwuo maka otu esi eme ka Pọtụfoliyo maka akara mmụta elementrị maka nwa agbọghọ
Ọ bụrụ na ndị nne na nna anụ na ha kwesịrị iwebata Pọtụfoliyo nwa ha maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ha na-enwe mgbagwoju anya. N’ezie, ụfọdụ ọrụ chọrọ folda na ụfọdụ nke ọrụ ha. Mana otu esi eche ...
Etu ị ga-esi ahọrọ arịa nri plastic na mkpuchi?
Ihe na 15.09.2019 09.11.2019
Ọ dịghị mfe maka ndị nwunye ugbu a ime na-enweghị efere plastik. O siri ike ikwenye na akpa nri plastik nwere mkpuchi na-eme ka ndụ na kichin dịkwuo mfe. Ọ bụghị naanị ngwaahịa ndị dị otú a na-eme ka nkesa dị mfe nke ngwaahịa ọ bụla ...
Ọnụọgụ abụọ: otu esi ahazi ya na otu esi eji ya
Akụkọ ihe mere eme nke oge a na-aga n'ihu kemgbe narị afọ. N’oge a, olee ụdị usoro mkpebi sitere n’aka ndị mmadụ chepụtara echepụta - malite na nke ahụ dabere n’ọnọdụ Sun na mbara igwe nye ndị elektrọnik. Ikpeazụ ...
Kedu mgbe ị ga-eme ememe ncheta ọmụmụ Anastasia?
Ihe na 15.09.2019 28.12.2019
Anastasia bụ aha ochie mara mma nke aha ya bụ “akpọlitere n'ọnwụ” ma ọ bụ “mbilite n'ọnwụ”. Ekwenyere na ụmụ nwanyị nwere aha a siri ezigbo ike ma na-agbanwe agbanwe, dị nwayọọ na ndị ha hụrụ n'anya ma nwee oyi na ndị bịara abịa ma ọ bụ ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,510.